Ikhaya le-Kingston elinendawo yokubuka izwe. - I-Airbnb
Ikhaya le-Kingston elinendawo yokubuka izwe.
Kingston, New Brunswick, i-Canada
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Judy
Indlu Eyakhiwe Ngamapulazi Engu-1850 enama-acres angu-90 asemaphandleni amahle aseduze neDolobha lase-Hampton nemizuzu engu-45 ukuya eDolobheni lase-Saint John nemizuzu engu-45 ukuya edolobheni lase-Sussex. Indlu ethulile nebukekayo endaweni engahanjwa njalo enemfudumalo & ubuntu nomlando.
Sebenzisa ngokunenzuzo le ndawo enhle ongayinikeza Ekwindla futhi uqhube i-Kingston Peninsula yethu enhle ngokubuka okumangalisayo kwemibala yethu & ukubuka okucwebezelayo kwe-Kennebecasis River nemisebenzi yasebusika ehlanganisa ukushwibeka eqhweni, njll.
Ithulile, inokuthula, ithokomele futhi ithokomele endaweni yasemaphandleni enendawo ngaphakathi nangaphandle.
Kukhona futhi umzila wemvelo wangasese onamakhilomitha angu-2 ongafinyeleleka kuleli pulazi elingama-acre angu-90 kanye nokufinyelela echibini. Izinto ezenziwa ebusika zisuka nje emnyango wangemuva zihlanganisa ukushushuluza eqhweni, ukutshuza eqhweni, ukushwibeka eqhweni nokushushuluza eqhweni.
Zingenise nge-smart lock. Uzonikwa ikhodi ye-Smartlock uma ukubhukha kwakho sekuqinisekisiwe.
Uma uhlela ukubhukha ezinyangeni zasebusika sicela wazi ukuthi indlu yami yasemapulazini ifudunyezwe ngempompi yokushisa kanye nokushisa kukagesi. Indlu yami ingaba indawo epholile lapho ngingenako ukushisa kukagesi ekamelweni lami lokuphumula, ngempompi yokushisa kuphela & elinye lamakamelo okulala alinawo umthombo wokushisa, ikamelo lokulala le-Master line-fireplace kagesi kanti ikamelo lesithathu lifudunyezwa yi-heaterpump. Ikhishi linokushisa nokushisa kukagesi. Umpompi wokushisa uvala lapho izinga lokushisa ngaphandle lifinyelela ku- -15 celsius. Ama-Heaters ayatholakala uma kwenzeka uthola ikamelo lokuphumula & ikamelo lokulala elilodwa lipholile.
I-Kingston ithule futhi inomuzwa wokuthula kakhulu wokuhlala ngaphandle futhi uzwe lutho. I-Kingston iseduze neDolobha lase-Hampton imizuzu engu-15 kuphela & imizuzu engu-10 ukusuka endaweni yokuphuza igesi & Isitolo esitholakala e-Kingston Corner. Kukhona Imakethe Yabalimi eseduze futhi ivula izinsuku eziyisikhombisa ngeviki ku-Main Street e-Hampton nawo wonke amasevisi esitolo sokudla, izindawo zokudlela, iziteshi zesevisi, ihhovisi lokuposa njll elise-Hampton. Isikebhe sase-Kingston Peninsula sisekude ngemizuzu engu-15 futhi sinqamula umfula i-Kennebecasis enroute eya e-Rothesay & Quispamsis. Ungase futhi ushayele ukuya e-Hampton ukuthatha umgwaqo omkhulu oya e-Rothesay, e-Quispamsis nase-Saint John.